नेपालमा स्टार र सुपरस्टार छैनन् भन्ने अभिव्यक्तिले निश्चल विवादमा ~ भिडियो ~ « रंग खबर
नेपालमा स्टार र सुपरस्टार छैनन् भन्ने अभिव्यक्तिले निश्चल विवादमा ~ भिडियो ~
रंगखबर, काठमाडौँ – लकडाउनले ‘डाउन’ भएको नेपाली फिल्म क्षेत्र यस बीचमा निस्किएका विवाद र आरोप-प्रत्यारोपले झनै खस्किएको छ । देश कोरोनाको महामारीले थलिएको बेला यो क्षेत्र सस्तो चर्चामा अगाडी रह्यो ।
फिल्मका कार्य विगत ३ महिनादेखि ठप्प छन् । लकडाउन खुकुलो हुँदै गर्दा अन्य क्षेत्र विस्तारै सक्रिय भएपनि यो क्षेत्र कहिले सामान्य हुने हो ? कुनै टुंगो छैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा फिल्म क्षेत्र असामान्य बन्दै गएको छ । लकडाउन सुरु भएसँगै अभिनेत्री सुस्मा कार्की र पूजा शर्मा बीचको झगडा लाइमलाइटमा रह्यो । त्यसपछि वर्षा राउत, मनिषा कोइराला, (दीपाश्री निरौला/दीपकराज गिरी/रवि लामिछाने/पूजा शर्मा)सँग जोडिएका विवादले चर्चा पाए । पुन: पूजा शर्मा दीपाश्री निरौलासहित भुवन केसी, राजेश हमाल र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह जस्ता कलाकारहरुका नयाँ विवाद अगाडी आए ।
साम्राज्ञीले अभिनेता भुवन केसी विरुद्द दुर्व्यहारको आरोप लगाएको विवाद अझै साम्य भएको छैन । दीपाश्रीको नेपालमा ‘महानायक हुनु हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नले निम्त्याएको विवाद लगभग साम्य हुँदैछ । दीपाको बोलीले सुरु भएको विवाद अभिनेता राजेश हमालले अन्त्य गर्नुपर्यो । सामाजिक संजालमा नकारात्मक प्रतिक्रियाको चाङ लागेपछि राजेश आफैले दीपालाई माफ गरिदिन दर्शकसँग आग्रह गरेका थिए ।
दीपा-राजेश विवाद साम्य हुँदै गर्दा पुन: निर्देशक/अभिनेता निश्चल बस्नेत विवादमा तानिएका छन् । उनले ५ वर्ष अगाडी संचारकर्मी ऋषी धमलासँग दिएको अन्तर्वार्ता अहिले आएर भाइरल बनिरहेको छ ।
२०७२ साल कार्तिक १६ गते हिमालयन टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको उक्त कार्यक्रममा निश्चलले भनेका छन् ‘राजेश दाईको पछिल्लो कुन चलचित्र चलेको छ ? भुवन दाईको कुन चलचित्र चलेको छ ?’ त्यसपछि प्रस्तोता धमलाले प्रश्न गर्छन, ‘त्यसोभए अहिले चलेको चलचित्र कुन हो त ?’
निश्चल जवाफ फर्काउछन, ‘अहिले नाम चलेको रेखा जीको फिल्म, राजेश दाईको फिल्म, भुवन दाईको फिल्म अलिअलि हेरेको छु । मेरो लागि त चलेको छ जस्तो लाग्दैन ।’ फेरि धमला प्रश्न गर्छन, ‘आजको दिनमा नेपालको नम्बर १ हिरोइन को ?’
निश्चल फेरि जवाफ दिन्छन, ‘नम्बर १ हिरो र हिरोइन नै छैन नेपालमा । स्टार र सुपरस्टार पनि छैन नेपालमा ।’ धमला पुन: प्रश्न गर्छन, ‘त्यसो भए लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ नेपाली चलचित्र ?’
त्यसपछि निश्चल भन्छन, ‘लथालिङ्ग र भताभुङ्ग थियो । तर, अहिले जुन किसिमको चलचित्र बनिरहेको छन, त्यसले नयाँ बाटो देखाउदै छ । र हामीले बाटो बनाउदै छौँ ।’
यो ४८ सेकेण्डको अन्तर्वार्ताको टुक्रालाई अहिले केहि फिल्मकर्मी र दर्शकले शेयर गरेर निश्चलको बोलीमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरुको प्रश्न छ, ‘के नेपालमा स्टार र सुपरस्टार कलाकार नै छैनन् त ?
राजेश हमालको ‘महानायक’ उपाधिलाई लिएर बहस सिर्जना भैरहेको समयमा एक चल्तीका निर्देशकले नेपालमा ‘स्टार र सुपरस्टार’ कलाकार नै छैनन् भनेको अन्तर्वार्ताले बहसमा प्रश्न खडा गर्छ ?
‘कबड्डी कबड्डी’ रिलिज ताका निश्चलले यो अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उक्त फिल्ममा निश्चल कलाकार र कार्यकारी निर्माताको रुपमा थिए । यो समयसम्म निश्चलले निर्देशन र अभिनय गरेका ‘लूट’, ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’सहित ‘फिटकिरी’ र ‘कबड्डी’ रिलिज भैसकेका थिए ।